6 Tusaalooyin oo ku saabsan sida ay Ganacsiyadu u awoodaayeen inay u koraan inta uu socday Aafada | Martech Zone
Bilowga cudurka, shirkado badan ayaa jaray miisaaniyadooda xayeysiinta iyo suuqgeynta sababo la xiriira hoos u dhaca dakhliga. Ganacsiyada qaarkood waxay u maleynayeen in shaqo ka joojinta ballaaran awgeed, macaamiisha ay joojin doonaan qarashka sidaa darteed miisaaniyadda xayeysiinta iyo suuqgeynta ay hoos u dhacday. Shirkadahani waxay hoos u foorarsadeen iyagoo ka jawaabaya dhibaato dhaqaale.
Marka lagu daro shirkadaha ka labalabeeya inay sii wadaan ama bilaabaan ololeyaal xayaysiis cusub, telefishanka iyo idaacadaha ayaa sidoo kale la halgamayay inay keensadaan oo ay sii haystaan ​​macaamiisha. Hay'adaha iyo shirkadaha suuqgeyntu waxay u isticmaali karaan fursaddan inay ka caawiyaan labada dhinacba inay ka gudbaan dhibaatada baahsan ee faafa. Sida Suuq-geynta Silver Frog ay aragtay, tani waxay ka dhalan kartaa xayeysiis iyo ololeyn suuq-geyn ah oo gacan ka geysatay ballaarinta ganacsiyada intii lagu jiray aafada. Waa tan sida ganacsiyada ay awood ugu yeesheen inay koraan inta lagu gudajiray aafada, iyo dhaqamada maskaxda lagu hayo iyadoo la dhisayo ololeyaal xayeysiis masiibo kadib.
Maaddaama ganacsiyada ay daawanayeen dhuumaha dhuumahooda barafoobay markii masiibadu ku dhacday, hoggaamiyeyaashu waxay ka shaqeeyeen inay ilaaliyaan oo ay kobciyaan cilaaqaadka halkii ay ku xirnaan lahaayeen rajada. Shirkado badan ayaa u dhaqaaqay inay maal gashadaan isbeddelka dhijitaalka ah madaama shaqaalahoodu aysan ku shaqeyneynin awood tan iyo markii ay yareysay saameynta howlaha guud. Socdaalka iyo otomatiga howlaha gudaha, shirkaduhu waxay awoodeen inay wax ku oolnimada wadaan.
Dibedda, u guuritaanka meherado aad u adag ayaa furay fursado lagu bixinayo khibrad macmiil oo sare sidoo kale. Hirgelinta safarada macaamiisha, tusaale ahaan, wadashaqeynta, qiimaha, iyo kor u qaadista fursadaha macaamiisha hadda. Saameynta gudaha iyo dibeddaba waxay culeesatay doolar badan waxayna siineysaa aasaaska iibka guga markii dhaqaaluhu soo noqday.
Gorgortanka Dhamaadka Jabhadda
Telefishanka iyo idaacadaha, aafada waxay sababtay hubin la'aan sababo laxiriira isbadelka miisaaniyadaha xayeysiinta iyo shirkadaha jiidaya ololahooda xayeysiinta. Waxaa cadaatay in wakaaladaha iyo idaacadaha looga baahan yahay inay wada shaqeeyaan si ay uga caawiyaan buuxinta baahiyahooda. Wada shaqeynta idaacada si looga wada xaajoodo sicirka dhinaca hore ee hore faa iido uma yeelan karaan saldhigga oo keliya, laakiin sidoo kale wuxuu ka faa'iideysan karaa macmiilkaaga.
Helitaanka walxaha sida cabbirka dhagaystayaasha iyo cabirrada iibsiga qaarkood ee aasaaska u ah wada-xaajoodyada si loo helo qiime hoose ee dhammaan macaamiisha ayaa ah wax fure u noqon kara ololahan. Markaad hoos u dhigto sicirkaaga, qiimahaaga jawaabta ayaa yaraan doonta ka dibna ROI-gaaga iyo faa'iidadaada ayaa cirka isku shareeri doonta.
Christina Ross, oo ah aasaasaha Suuq-geynta Silver Frog
Adoo la xaajoonaya qiimayaashan ka hor intaadan xitaa lahadlin macmiilka, waxaad xireysaa sicirka shirkadda oo dhib ku noqon kara tartamayaasha inay ka adkaadaan. Halkii laga gorgortami lahaa iyadoo laga duulayo shirkadda gaarka ah, ka wada xaajoodka dhinaca hore wuxuu ku siin karaa qiime aan fiicnayn saldhigga iyo macmiilka.
Xushmee oo deji Miisaaniyadda dhabta ah
Intii lagu gudajiray aafada, shirkaduhu waxay ka labalabeenayeen inay meel dhigaan miisaaniyado badan sababo la xiriira hubanti la'aan iyo shaki ah in macaamiisha ay qarashgareyn doonaan lacago. Taasi waa sababta ay muhiim ugu tahay shirkadaha inay sii wadaan dejinta miisaaniyadii ay ku qanacsanaayeen oo ay ixtiraamaan maadaama ololaha la bilaabay.
Had iyo jeer ku bilow miisaaniyad aad ku qanacsan tahay. Waxaad ku sameyn kartaa tan adoo falanqeynaya sicirradii hore, waaya-aragnimadii, iyo wixii adiga iyo shirkaddaada u soo shaqeeyay. Markaad dejiso jaangooyooyinkan, waxaad kuheli kartaa faham cad waxa aad u baahan tahay inaad ku qarash gareyso si aad ugu soo jiido dakhliga bartilmaameedka.
Fahamkan iyo wada hadal daacad ah oo lala yeesho macaamiisha inta lagu jiro aafada ayaa horseeda guul weyn. Iyadoo loo marayo baaritaanka xogta suuqa, ku sugnaashaha sicirka iyo saldhigyada lagula xisaabtamo waqtiyada ay socdaan si loo helo dhibco, shirkaduhu waxay u sameyn karaan guulo waaweyn macaamiishooda.
Hayso Jadwal Isbedelaya
Faafka waa mid aad u adag in la maro maxaa yeelay waa arrin aan la saadaalin karin. Wax aragti ah kama lihin saameynta ama raadadka faafa si fudud maxaa yeelay weligood sidan horay uma aanan marin. Inta lagu jiro waqtigan, waxay muhiim u tahay ololayaasha xayeysiinta inay ahaadaan kuwo jilicsan.
Kaliya ballansashada macaamiisha laba toddobaad, ama bil, markiiba waxay u oggolaaneysaa dabacsanaan wanaagsan. Tani waxay u oggolaaneysaa hay'adaha inay falanqeeyaan tirooyinka ayna go'aan ka gaaraan suuqyada, saldhigyada, iyo qaybaha maalinlaha ah ee ugu fiican iyo halka ololuhu ka dhacayo si aad diiradda u saarto kuwa waxqabadka fiican halkii aad ka lumin lahayd lacagta macmiilkaaga.
Dabacsanaantaani waxay u oggolaaneysaa shirkadaha iyo wakaaladaha inay si joogto ah udirto ololahooda si loo gaaro ROI sare. Maaddaama meelaha ugu daran ay sii socdaan isbeddelka oo xuduudaha dowlad-goboleedku ay dabacsan yihiin dib-u-furista, taas oo u oggolaanaysa ololahaaga inuu yeesho dabacsanaan joogto ah oo u oggolaanaysa doollarkaaga xayeysiinta inay la rogto feedhyo aan la saadaalin karin oo aan hadda wajahayno. Ololeyaal badan oo fadhiid ah iyo kuwo dhaadheer ayaa lumin doona dallacaadaha xayeysiinta waxayna keeneysaa jawaab hoose oo leh qiimo sare halkii wicitaan.
Bartilmaameedka Goobaha Maalinlaha
Intii lagu gudajiray aafada, macaamiisha qaar shaqada ayaa laga ceyrinayey halka kuwa kale ay ka shaqeynayeen guryahooda.
Mararka qaarkood waxaan leenahay macaamiil muujiyaan walaac yar oo ku saabsan hawada maalintii maxaa yeelay fikradda khaldan ee ah in dhammaan dadka daawanaya TV-ga maalintii ay shaqo la'aan yihiin. Taasi runta way ka fogayd, xitaa kahor musiibada, laakiin hada way kasii yaraatay iyada oo dad badan ay guryahooda ka shaqeeyaan. ”
Steve Ross, oo ah aasaasaha Suuq-geynta Silver Frog
Iyada oo dad badani daawanayaan telefishanka isla markaana dhagaystaan ​​raadiyaha, ayaa qiimaha halkii wicitaan hoos u dhacay. Dad badan ayaa guriga joogey taasoo la micno ah in dad badani ay arkeen xayaysiinta sheyga oo ay soo wacayaan.
Waa muhiim inaad ka faa'iideysato boosaskaas maaddaama dhagaystayaashu ay sii wadaan inay beddelaan. Adoo adeegsanaya dhagaystayaashan cusub, sheygaaga ayaa la hor dhigi doonaa dad badan oo awood u leh inay maalgashadaan. Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa marin u helista kuwa laga yaabo inaadan awoodin inaad la kulanto ka hor faafidda musiibada sababtoo ah jadwalka shaqada ee mashquulka ah iyo daawashada hoose ee tirakoobka dadka qaarkood.
Samee Taatikada Cabiraadda Khaaska ah
Marka macaamiisha ay ka jawaabaan ololaha xayeysiinta, si fudud u weydiinta halka ay ku arkeen xayeysiintu waxay noqon kartaa tallaabo khatar ah. Tani waa sababta oo ah inta badan, macaamilku wuxuu aad ugu foogan yahay sheyga oo ma xasuustaan ​​meeshii ay ku arkeen. Tani waxay u horseedi kartaa warbixin marin habaabin ah oo aan khalad ka imanayn macaamilka.
Si looga caawiyo cabbiraadda xayeysiinta, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo lambar 800 oo sax ah oo ganacsi kasta ah. Waad xiriirin kartaa iyaga oo lambarradan ka dhigi kara isla xarun wicitaan si macmiilkaagu ugu habboonaado. Adoo siinaya lambar sax ah xayeysiin kasta, waxaad la socon kartaa halka wicitaanadu ka imanayaan oo waxaad soo saari kartaa warbixinno sax ah. Sidan, waad ogtahay sida saxda ah saldhigyada ay ka faa'iideysanayaan macmiilkaaga si aad ugu sii wado inaad soo koobto ilaha dakhliga ee guuleysta oo aad dhisto ROI.
Lambarradan ayaa waxtar kuu yeelan kara marka la fahmayo saldhigyada iyo suuqyada ololahaagu u baahan yahay inuu sii wado bartilmaameedka. Adiga oo aan lahayn cabbiraad sax ah jawaabta, ma dhaawici karto oo keliya ololahaaga, laakiin sidoo kale waxay dhaawaceysaa miisaaniyaddaada xayeysiinta.
Maaddaama Suuqgeynta Silver Frog ay wajahday ganacsiyo badan oo aan ogeyn haddii ay badbaadi doonaan aafada, waxay sii wadeen dadaallada ay ku soo saarayaan guushoodii hore. Laga soo bilaabo kororka miisaaniyadaha macaamiisha 500%, ilaa dhimista qiimaha macaamiisha halkii jawaab ee 66%, waxay u suura galisay ganacsatadu in ay kordhiyaan dakhliga isla markaana ay ku soo noqdaan maalgashiga inta lagu jiro heerka aafada. intuba iyagoo kharash gareeya lacag ka yar intii ay ku bixin jireen.
Waqtigan xaadirka ah, waxay muhiim u tahay shirkadaha inay sii wadaan xayeysiinta si ay uga soo kabtaan khasaara kasta oo ay u sii wadaan inay koraan.
Haddii adiga ama shirkaddaadu aad jeceshihiin inaad wax badan ka ogaataan tilmaamaha iyo tabaha lagu hagaajinayo ololayaasha xayeysiinta inta lagu jiro aafada, booqo Suuq geynta Silver website.
Tags: xayeesiintamiisaaniyaddakobaca ganacsigaFayruuska coronaIsbadal digital ahdhaqaalahajadwal dabacsanmasiibomiisaaniyadda iibkaqiyaasta iibkagorgortanka iibkajadwalka iibkabartilmaameedka boosaska maalinta
Aafada ayaa si aad ah u saameysay ganacsiga. Laakiin kuwii awooday inay la qabsadaan xaaladaha cusub ayaa is hortaagay. Xiiso iyo wargelin leh. Mahadsanid!